Basa Remikana Pashure Kokuita PMP Certification
Ndezvipi zvinobatsira zve Project Project Certification?
Zvinonyanya kukosha uye zvinosanganisira kuwedzera zvakasiyana muRume yako
Shandura nzvimbo yako yekutsvaga basa kune unyanzvi hunoshanda
Pane imwe nguva iyo nguva yausina kushanda, iwe unoziva kukosha kwekuva nhanho pamberi pevanokwikwidza maererano nekuwana basa. Ive hupenyu hwehutano hwakazara nezvinetso uye vanhu avo vari kutanga vaizoziva izvozvo. Kudzidza ndicho chinhu chinokonzera kukunda chimiro chebasa chetsika uye basa rinogutsa. Zvinonyanya kukosha kuti unhu hunoyevedza pamagariro ekuti ivo ndizvo zvichava nemagumisiro ose ekunyora. Kuti uisezve zvekudzoka kwako pamusoro, chirongwa chePP chiyeuchidzo chinoshingaira kuti uite zvinangwa zvako zvemhizha.
Izvo Project Management Certification iyo yose inobvumirana nemvumo yakakodzera inogona kuchinja vamiririri vashandi basa uye vashandi vanobudirira vari kutsvaga masuo akazaruka masuo. Mushumo unobatsira vatungamiri vemapurogiramu, vatambi vemapoka, vashandi vepurojekiti, vatsigiri vepurojekiti / injini, vashanduri vekushandura kana chero munhu anoedza kuva muteja weprojekiti.
Misika yemabasa ichashandurwa iwe. Izvo hazvisi kugadziriswa kuwana basa rinobhadhara zvakanaka, zvakanyanya kuoma ndezvekuwana vanhu vanofunga kuti vanozadza nzvimbo iyo, inotarirwa nemasangano nhasi. Muitiko iyo iwe unofanirwa kuva pane unoziva PMP icharatidza imwe urongwa hwemikana.
Imwe nyanzvi yekuchengetedza chirongwa, inoshanduka kuva yakanyatsogadzirisa uye inogadzira kuvimba mukunyora kushandiswa. Apo pavanosangana zvose zvinodiwa kuti zvizadzise sangano rose rekushanda kweprojekiti kubvira pakutanga, kuronga, kuuraya, kucherechedza, kutonga, uye kugumisa. Icho chiyeuchidzo chose chinosanganiswa chinozivikanwa nenhamba yakawanda yemabhizimisi. Zvimwe kunze kwekuwedzera kushandiswa kwemabasa, zvinogona kuvaka mupiro wemubairo kune vamwe vanhu zvakare.
Kune sangano chero ripi zvaro HR, mumwe nomumwe anotaura ane tariro ane maitiro evanhu vasina hanya asi izvo zvine PMP chiratidzo chekudzidzisa iwe unoratidza kusiyana. Icho ndicho chinhu chingaita kuti nzvimbo yakajeka ione. Icho chinoratidza kuti iwe wakakosha zvikuru kutumira mapurojekiti anouya nechomukati izvo sangano rinotarisira kubva kwauri semutungamiriri. Chero zvazvingava sangano iri nyika kana nyika dzakasiyana-siyana, PMP inogona kukupa iwe kutanga kukuru kwekutanga uye kubudirira kunofambira mberi mune ramangwana. Kuti uwedzere kukosha kwesangano uye yako zvakare, zvakakosha kusika ruzivo uye kusangana uye ndicho chikonzero chidzidzo chePPP chisarudzo chakanaka chekutsvaga basa munyika yose.
Unyanzvi hwekunyora anofanira kuwana mauri unhu hunoita kuti iwe uve muiti wekubatsira hotspot kune sangano. I PMP inotsigira kutumira uye simba basa. Sangano rinoda kugovera uye kupa mikana kune vamiririri vanounza zviitiko zvechokwadi.
I PMP inowedzera kubhadhara kwako uye yakakudzidzisa iwe wese wehutungamiri hurongwa hwokuvaka humwe hutano hwemamiriro ekutsvaga. Iyo archive authoritatively inoratidza unhu hwako uye unhu huri mumunda.
Izvo Project Management Certification ndiyo yose inosanganisira chirevo chakanaka saka iwe unowedzera maitiro ako. Iwe unogona kunze kwekuwanda kwekutsvaga kushandura nzvimbo yako yekutsvaga basa kune unyanzvi unyanzvi. Nhoroondo yezvinyorwa inorayirwa kuti ipe mapoka mapiyona, vashandisirwo purogiramu, vatsigiri vepurojekiti / injini, vashanduri vekushandura kana ani zvake anoziva, ane ruzivo anoedza kuva muteja weprojekiti.
Bhizinesi Analysts Chirongwa cheVatangadziri & Professional